Spotify Student Discount (2020) - Ahoana ny fampiharana torolàlana - Fialam-Boly
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Spotify?
Spotify no serivisy fandefasana mozika lehibe indrindra manerantany. Olona an-tapitrisany no mampiasa azy amin'ny filany mandriaka. Misy mpanakanto an-tapitrisany avy amin'ny toerana rehetra eny ambonin'ny lampihazo. Mpianatra dia iray amin'ireo mpijery kendrena betsaka indrindra amin'ity rindranasa ity. Ny orinasa dia manandrana mamerina amin'ny fiarahamonina ihany koa. Amin'ny maha mpianatra anao dia manoro hevitra anao izahay hanararaotra ity fifanarahana mpianatra mahafinaritra ity.
Ny fampiasam-bolanao ankapobeny dia hihena be kokoa. Amin'ity torolàlana ity dia horesahintsika ny lafiny samihafa amin'ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra. Manantena izahay fa hamaly ny fanontanianao rehetra ary hanaisotra izay fisalasalana rehetra.
Fanolorana mpianatra hafa tokony hojerenao
Dingana hisoratra anarana amin'ny Discount ho an'ny mpianatra Spotify:
Ny fizotran'ny fisoratana anarana dia tsotra ho an'ny rehetra. Na iza na iza dia afaka miditra amin'ny sehatra ary mahazo ity tolotra ity. Azo alaina ho an'ny mpianatra manana mari-pahaizana ID na oniversite io. Any amin'ny faritra sasany dia mila manana adiresy mailaka .edu koa ireo mpampiasa. Raha mahafeno ireo mason-tsivana etsy ambony ianao dia atombohy avy hatrany ny fizotran'ny fisoratana anarana. Ity ny torolàlana ho anao hanampy anao. Araho ny dingana ho an'ny tontolon'ny streaming mozika vaovao.
Ny dingana voalohany dia ny fitsidihana ny tranokala Spotify. Ianao dia afaka kitiho eto ary zahao ny lampihazo. Hitondra anao mankany amin'ny pejy fandraisana Spotify ianao. Misy ny pitsopitsony rehetra momba ny drafitra sy tolotra ato amin'ity tranonkala ity. Tsindrio ny bokotra premium eo ankavanan'ny pejy.
Ny pejy web premium Spotify dia manome anao antsipiriany momba ny fisoratana anarana isan-karazany misy. Ireo mpampiasa dia afaka manararaotra ny fihenan'ny mpianatra eto. Mikorisa etsy ambany mba hahitanao ny drafitra mora indrindra miaraka amina tombony fanampiny an-taonina. Tsindrio ny bokotra fanombohana hanombohana mamorona kaontinao vaovao.
Ireo mpampiasa vaovao sy taloha dia samy manana ny safidiny hampiasa an'ity fihenam-bidy ity. Raha efa manana kaonty ianao dia midira miaraka amin'ny taratasinao. Ny tranokala Spotify koa dia manana fotoana hidirana amin'ny Facebook sy Apple ID. Amin'ny maha-mpampiasa vaovao anao dia azonao atao ny manindry ny bokotra 'misoratra anarana ho an'ny Spotify' hita etsy ambany.
Ny pejy fisoratana anarana dia hanontany anao momba ny mombamomba anao manokana. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny Facebook mba hanaovana haingana ny fizotrany. Ao anatin'izany ny fametrahana ny kaontinao vaovao amin'ny mailaka sy teny miafina. Ireo mpampiasa dia tsy maintsy manampy ny daty nahaterahany, ny anarany sns. Vahao ny captcha ary kitiho ny bokotra fisoratana anarana. Hanangana ny kaonty vaovao eo noho eo izy.
Ny dingana fanamarinana dingana telo dia mitaky anao hiditra ny ID mailaka eny amin'ny oniversite. Hanamarina eo no eo ny fisoratana anarana anao ary hanamarina anao ny fihenam-bidy omen'ny mpianatra. Afaka manararaotra avy hatrany ny tolotra ianao nefa tsy misy fanemorana amin'ny fanamafisana. Mety ho an'ny oniversite amerikana rehetra izany. Mila miditra amin'ny anarany, oniversite ary daty nahaterahany ny mpianatra. Tsindrio ny bokotra mahazo premium raha handroso.
Ny dingana farany amin'ny dingana dia ny manampy ny fampahalalana momba ny fandoavam-bola. Ireo mpampiasa dia afaka mandoa vola amin'ny alàlan'ny carte de crédit amin'ny tranokala. Voaro amin'ny tsiambaratelo izy io hahazoana antoka fa afaka manana fifanakalozana azo antoka ianao.
Dia izay! Vidinao tsara ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Spotify. Manantena izahay fa afaka mifaly amin'ny fampiasana an'ity serivisy ity ianao. Ilaina ho an'ny lohan'ny mozika rehetra any amin'ny anjerimanontolo.
Endri-javatra amin'ny Spotify Premium:
Ny fiasa amin'ny drafitra fihenan'ny mpianatra Spotify dia miovaova arakaraka ny faritra misy anao. Azonao atao ny mahita ny tombony ho anao rehefa vita ny fividiananao. Ireto ny tombony azo amin'ny fanaovana an'io fividianana io.
1. Rano sy fisintomana tsy misy fetra voafetra
Ireo mpampiasa premium Spotify dia afaka mamonjy ny mozikany henoina eny am-pandehanana. Samy efa nandre ireo doka Spotify manelingelina daholo isika. Azonao atao izao ny misoroka azy ireo amin'ny fampiasam-bola kely. Ny renirano tsy misy doka rehetra dia mety indrindra amin'ny filanao mozika. Afaka manana traikefa mirindra sy milamina ianao.
Ny fihenan'ny mpianatra dia mampihena ny enta-mavesanao amin'ny fandoavam-bola lafo isam-bolana ihany koa. Ny fisintomana dia mamela anao hitahiry mozika avo lenta mora foana. Tsy mandray toerana fitahirizana betsaka koa izy ireo. Ny streaming an-tserasera dia misy hitahiry angona rehefa mandeha.
2. Fitsarana maimaim-poana mandritra ny 3 volana
Spotify dia manolotra ny mpianatra amerikana rehetra mandritra ny 3 volana fitsarana maimaimpoana ho an'ity drafitra ity. Ny faktioranao voalohany dia ho tonga volana aorian'ny hanaovanao ny famandrihana.
Fampiasam-bola tena tsara ho an'izay liana. Na izany aza, io dia manan-kery ihany raha toa ka vonona hanao fanoloran-tena maharitra ianao. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mijanona amin'ity drafitra fihenan'ny mpianatra ity mandritra ny herintaona. Ireo mpampiasa dia tsy afaka manafoana ny famandrihana aorian'ny fizahan-toetra mandritra ny telo volana. Fifampiraharahana tena tsara ho an'izay mihaino mozika be dia be izany. Spotify no manana ny tranomboky lehibe indrindra amin'izao fotoana izao.
3. Famandrihana fanampiny
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra dia nofonosina famandrihana Showtime sy Hulu (doka) maimaimpoana. Ireo dia fanampiny tonga lafatra ho an'ny mpianatra.
Afaka mankafy atiny premium amin'ny alàlan'ny famandrihana tsy lafo ianao. Isika rehetra dia mandany ny 2020 manoloana ny efijery. Ny fampisehoana streaming sy ny sarimihetsika mampihetsi-po dia lasa mahazo aina amin'ireo serivisy ireo Matetika ny mpianatra dia manana teti-bola ambany nefa ny fandaniana izany amin'ity drafitra ity dia toa mendrika. Betsaka ny famandrihana miampy sanda amin'ity drafitra ity.
Manantena izahay fa tianao ireo fiasa atolotry ny premium Spotify ho an'ny mpianany. Fanampiny tsara ho an'ny tombontsoanao io.
Vidiny ny Spotify:
Ny serivisy premium Spotify dia misy amin'ny vidiny mirary indrindra. Mbola mora kokoa aza ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra. Ny vola lany dia $ 4,99 isam-bolana ho an'ny fihenan'ny mpianatra. Manoro hevitra anao izahay hividy an'ity drafitra ity ary hampiasa ireo tombontsoa mahafinaritra. Ireo teknika hafa dia misy amin'ny vidiny mirary ihany koa. Ny drafitra mahazatra dia handany anao $ 9.99 isam-bolana. Izay tsy mianatra amin'ny oniversite dia afaka manandrana indray ny drafitra premium. Fanampiny tena tsara amin'ny findainao izy io. Raha ny fihainoana mozika no fialam-boly tianao indrindra, dia tsy tokony ho antony iray ny vidiny.
Fanamarinana amin'ny tanana:
Ny mpianatra sasany dia mety miatrika olana amin'ny fanamarinana Spotify. Mety hitranga amin'ny tranga vitsivitsy tsy fahita firy izany. Raha tsy afaka manaraka ny fanekenao ny tranokala dia safidy ny fanamarinana amin'ny tanana. Ireo mpampiasa dia afaka manamarina izany avy amin'ny toe-javatra mombamomba azy ireo. Mila mandefa mailaka mankany amin'ny Spotify miaraka amin'ny famantarana ny oniversite ianao. Haharitra andro vitsivitsy, fa tena lafo ny vidiny. Manoro an'ity safidy ity izahay raha toa tsy vitanao ny manamarina mandeha ho azy.
Manantena izahay fa ity torolàlana ity dia tena nanampy an'ireo mpamaky anay. Spotify no fampiharana mozika mandeha ho an'ny mpihaino an-tapitrisany. Azonao atao ny manandrana azy anio ary mijery ny serivisy. Mamorona playlists tena tsara ary zarao amin'ny namanao. Misy antony marobe handoavana premium. Manantena izahay fa manana traikefa tsara amin'ity serivisy fandefasana hira ity ianao.
Toerana misintona Subtitles tsara indrindra (2020)
rindrambaiko fandraketana maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny rapika
lalao tsy voasakana maimaimpoana any an-tsekoly
sling tv 30 andro fitsarana maimaim-poana
aiza no ahafahako mandefa sarimihetsika maimaimpoana
mahazo kaody maimaimpoana ho an'ny amazona
ny fomba hialana amin'ny hidim-pidirana